développement personnel gasy – Page 2 – Blaogin'i Voniary
Étiquette : développement personnel gasy
Raha jerena amin’ny ankapobeny ny fiainana dia mety ho fijaliana, olana, sedra sy ny sisa no mameno azy. Arakaraka ny fijerinao ihany anefa no mahatsara sy maharatsy ny fiainanao. Raha mahay mankafy sy manisy lanjany ny fotoana mamy ianao, dia ho hitanao fa mahafinaritra ny fiainana. FIJERY MIABO Faly ve ianao fa misy felan-draozy ilay... Lire la Suite →
8 août 2016	 0
IZAO NO FOTOANA TSARA
Aza manjeny andro ho lava ! Izao no fotoana tsara anombohanao izay efa nokasainao hatry ny ela ! Izao no fotoana tsara anatanterahanao ilay nofinofinao. Izao no fotoana tsara anapahana hevitra. Matetika isika miandry olona hafa handray fepetra amin’ny fiainantsika. Ny tena marina anefa dia fiananao io fa tsy fiainany. Ianao no mahalala izay mety aminao. Ianao... Lire la Suite →
Ny fiainanao, manomboka ianao vao teraka hatramin’ny andro handaozanao an’ity tany ity dia mipetraka ho tantara. Tantara ho an’izay manodidina anao, ho an’ny firenenao ary ho an’ny taranakao. Ny mpanoratra dia ianao sy Ilay mpahary anao. Mandahatra Izy, fa omeny safidy koa ianao amin’izay làlana izoranao. Manan-danja amin’ny fiainanao ny fiekenao ireo toe-javatra roa ireo... Lire la Suite →